Baolina kitra : hafanadrina eny Alarobia ny polisy sy ny miaramila
Lalo telo goavana no hanombohana ny an’ny fiadiana ny ho tomondakan’Analamanga eo amin’ny baolina kitra eny amin’ny kianjan’Alarobia amin’ny alahady izao.
Hanokatra izany ny fifanandrinana eo amin’ny ekipan’ny polisim-pirenena sy ny miaramila, izay samy mitovy isa, saingy sarahin’ny baolina nampidirina. Hiverina hiakatra kianja ihany koa ny Japan Actuel’s, izay vaonahavita nanasahala ny isa tamin’ny fiahaonan’izy ireo sy ny AS Adema, tamin’ny talata teo. Ny vesta Team kosa no hihaona amin’izy ireo. Andrasan’ny rehetra ny mety ho fanarenana ny tsy nety teo amin’ny Iarivo Football Club, izay notanan’ny polisy tamin’ny alalan’ny isa 0 no ho 0 tamin’ny andro voalohany. Ny Dartline, izay ekipa vao nisondrotra ho eo amin’ny diviziona voalohany tamin’ity taona ity taona ity no hihaona amin’izy ireo amin’izany.
Hatreto dia mbola ny Ajesaia no mitarika vonjimaika eo amin’ny ity fifaninana ho an’Analamanga ity. Amin’ny alarobia 2 marsa ho avy izao etsy Mahamasina kosa no hifanandrina amin’ny AS Adema ity ekipan’i Taninkatsaka ity. Hiara- dalana amin’izany ihany koa ny lalaon’ny Tana Formation FC sy ny ASSM, izay efa nifanandrina tamin’ny alalan’ny lalao tsapa tetsy amin’ny kianjan’ny Masindahy Misely ka nanaovany ady sahala. Heverina fa henjakenjana ny lalao amin’ity andro faharoa ity satria mety hampitsimbadika tanteraka ny filaharana ireo fihaonana dimy, tafidotra ao anatin’ny lalao mandroso ireo.